Abdulahi mahad – Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga diiniga ah Bartaan
Author: Abdulahi mahad
Waxaan ahay muslim sunni ah heestana madhabka imamu shafici waxaan aminsanahay afarta madhab ee xaqa ah qofka muslimka ahna uu raaci karo kii uu doono oo uu jecleysto
Waa maxay Sakada Fidridu? Sakada Fidridu waa mid kamid ah Sakooyinka ku waajibka ah ruuxkastoo Muslima oo haysta wax ka badan cuntada Malinta iyo Habeenka Ciidufidrida, waxaana la bixiyaa Salaada Ciidulfidriga kahor. Waa Maxay xukunka Sakada Fidridu? Xukunka Sakada Fidridu waa ku waajib qofkasta oo Muslima oo haysta cunto ka badan Isaga iyo Caruurtiisa maalinta... Continue Reading →
Ugu horeyn: waxa muhiima in la ogaado Quraanka qiimaha uu leeyahay, waa hadalkii Ilaahay waana waxyigii Ilaahay kusoo dajiyey qaliga rasuulkii Ilaahay ee Muxamed (scw). Quraanku Kariimka wuxuu sharaf u yahay nabiga Muxamed (scw) iyo umadiisaba, sida Ilaahay quraankiisa ku tilmaamay: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44) Isaga (Quraanku) waa sharaftaada iyo sharafta... Continue Reading →
Waxa jiray laba nin oo reer banu-israa’iil ahaa, waxay ahaayeen shuraako balse mid wuxuu ahaa Mu’min halka ka kale ahaa Gaal. Labada Nin waxay wada yeesheen lacag dhan Lix kun oo Diinaar, kadibna way kala qaybsadeen oo waxay u kala heleen nin walba sadex kun oo Dirham. Mudo markay soo wareegtay ayay is arkeen... Continue Reading →
Cawrida ama ishu waa leeb uu soo gano ruuxa xaasidka ah, taasoo mararka qaarkood asiibta ama ku dhacda qofkii la ileeyey ama la cawryey. Hadii ruuxa muslimka ah akhristay ducooyinka iyo aayadaha kaa xijaabaya cawrida iyo sixirkaba markaa ishii kuma dhacayso, waxaana suurtagal ah in cidii wax ileynaysay inay dib ugu laabato. Maadaama cida wax... Continue Reading →
Nin reer baadiye ah oo Ilaahay run u sheegay. Ma ogtahay hadii aad Ilaahay run u sheegto inuu Ilaahayna kuu rumaynayo wixii aad rabtay. Waxa nabigeena (scw) u yimid nin reer baadiye ahaa, wuxuuna ka dalbaday inuu raaco. Nabigu (scw) wuu ka aqbalay, wuxuuna saxaabadiisa u dardaarmay inay daryeelaan. Maalintii danbe ayey muslimiintii weerar qaadeen,... Continue Reading →
In la ogaado xadiithka in ciladi ku jirto ma ilhaam baa? Horta ilhaam waxaa la yidhaahdaa in Ilaahay swt qofka uu siiyo wax, waxaas oo uusan xoog iyo xeelad isagu uu leeyahay uusan ku helin. Imaam kamid ah Culimada muxadithiinta ayaa laga yaabaa inaad weydiiso xadiith sixadiisa. Markaasuu intuu sidaa u eego xadiithka ayuu horey... Continue Reading →
Dad badan oo aan cilmi lahayn waxay u haystaan in islaamku dulmiyey haweenka oo dhaxalkooda uu ka dhigay ninka badhkii, hase ahaatee dadkaasi ma fahansana xikmada ku jirta arrintaas, sidoo kale ma oga in dumarku xaaladaha qaar ay ninka ka dhaxal bataan, ama ay isku in qaataan, ama gabadhu ay dhaxasho oo ninkuna aanu waxba... Continue Reading →
Waa kuma ninkii cilmiga lahaa ee soo qaaday Carshigii Balais?
Ilaahay (swt) wuxuu Quraankiisa inoogu sheegay in nabi Sulaymaan (cs) la siiyey awood iyo bqortooyo aan u cuntamin cid isaga kahoreysay iyo cid isaga ka danabysay toona. Waxa mucjisooyinkiisii kamid ahaa inuu fahmi jiray codka shinbiraha iyo qudhaanjada. Maalin ayuu hudhudkii nabi Suleymaan wuxuu arkay gabadha la dhaho Balqiisa oo madax ka ahayd boqortooyadii Saba’,... Continue Reading →
Maalinta Caashuura? Nabigeena Suuban Nabadgelyo iyo Naxariisi Korkiisa ha ahaatee, wuxuu inuu jeediyey oo Sunno nooga yeelay inaan Soono maalmo aan ahayn Bisha Radaman. Waxaa maalmahaas ka mid ah Maalinta Cashuura. Hadaba Maalinta Caashuuraa aan ka barano Saxaabigii Waynaa ee Mucaawiyah Binu Abi Sufyaan Ilaahay Raali haka noqdee. Wuxuu Yiri Mucaawiye: Waxaan maqlay Rasuulke Eebe(NNKH)... Continue Reading →
Gabadha la dhaho Shajaratu Durr, waxay ahayd jaariyad uu lahaa boqorkii dawladii Ayuubiyiinta ee Saalix Najmu Diin, waxayna asal ahaan kasoo jeeday wadanka Armenia. Gabadhan waxay ilmo u dhashay Saalxi Najmu Diin, hase ahaatee ilmihii wuu ka dhintay. Saalix Najmu Diin wuxuu ka talinayey xilligaas dalka Masar iyo dhulka Shaam, waxaana gacantiisa ku jiray magaalada... Continue Reading →
Bismillah: Sujudu waa xaalada adoonku ugu dhowyahay Rabbigii, waana siduu cadeeyey Rasuulkii Ilaahay (scw) isagoo ku booriyey umada Islaamka ah inay ku ducaystaan sujuuda dhexdeeda, ducadaas oo Inshallah la aqbali doono. Hadaba waxa kale oo jira dhawr sujuudood oo la sujuudo marka Quraanka la akhrinayo, waana 15 sujuudood, waxaana lagu gartaa aayada la sujuudayo calaamadan ۩.... Continue Reading →
Dardaarankaaga qor intaad nooshahay! Qisooyin wax lagu qaato.
Dardaaranka ruuxa Muslimka intaanu dhimanin kahor waa awaamirta ay diinta Islaamku ku boorinayso Muslimiinta, waxaanu dardaaranku u qaybsamaa mid waajiba, iyo mid sunne ah: – Qeybta Waajibka ah waa inuu qofku cadeeyo xuquuqda lagu leeyahay iyo xuquuqda uu isagu dadka ku leeyahay, sida dayn lagu leeyahay, alaabo loo dhiibtay oo amaano ah, ama xoolo isagu... Continue Reading →
Sagaal arrimood oo kuu culaysinaya Miisaanka Maalinta Qayaame
1aad: Shahaadada Tawxiidka: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُذْرٌ فَيَقُولُ لَا يَا... Continue Reading →
Laba Aayadood oo ka hortagay sharka Shayaadiinta Jinka iyo Insigaba
Waynida iyo Fadliga ay leeyihiin labada aayadood ee ugu danbeeya suurada Al-baqarah: Cidii akhrida habeenkii labada aayadood ee u danbeeya suurada Al-baqarah way ku filantahay. فروى البخاري (4008) ، ومسلم (807) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ... Continue Reading →
Ducada ilmaha yar ee Xanuusanaya loogu duceeyo
Hordhac: Rasuulkii Ilaahay (scw) wuxuu ina baray ducooyin badan oo aynu ugu ducayno cidii inaga xanuusata, ilmaha yar ee xanuustayna wuxuu lamid yahay dadka waayeelka ah ee ayaguna xanuusta, waxaana ilmahaas loogu duceynayaa ducooyinkii Rasuulkii Ilaahay uu ina baray. Ducada 1 aad: Akhrinta suuratu Alfaatixa. Waxa laga wariyey Abusaciid Alkhudriyy (RC) inuu nabigu (SCW) ku... Continue Reading →
Kitaabka Weysada Waxaa dhigay oo ka soo tarjumay kitaabka Al Imaamu Al Nawawii (النووي) ee Al “Majmuuc” (المجموع) Dr. Xasanwali Sheekh Xuseen Cismaan, DVM. Kow: Tusmada kitaabka Mawduuca Bogga: Tusmada Kitaabka Waysaysashada Niyada Bisinka qabso Dhiqidda labada gacnood Luqluqashada Sandaarsiga Dhaqidda wajiga Dhaqidda gacanta midig Dhaqidda gacanta bidix La marinta madaxa gacanta biyo Dhaqidda dhegaha... Continue Reading →
Ma rabtaa Danbi dhaaf iyo in ducada lagaa aqbalo?
Ibnu Aadamku goob kasta oo uu joogo iyo goor walba waxa ka dhaca qaladaad, danbiyo, gafaf, macaasi, dhaga adayg, inay ka gaabiyaan amarka Ilaahay iyo amarada Rasuulka Ilaahay (scw). Ayadoo taasi ay jirto ayaa Rabbiga naxariista naxariista wayni, wuxuu furay albaabada toobad keentka, illamaa qayaamuhu ka dhacayo ama qofku uu ka dhimanyo. Taas oo macnaheedu... Continue Reading →
Ma ogtahay in guryaha dhaadheer ee ka agtaagan Kacbadu inay kamid yihiin calaamadaha saacada
Ma ogtahay in guryaha dhaadheer ee ka agtaagan Kacbadu inay kamid yihiin calaamadaha saacada Qayaame, sidoo kale kanaalada dhaadheer ee kaqodon buurta Makkah ayaguna ay kamid yihiin calaamadaha saacada Qayaame. Dhanka kale dhuumaha dhaadheer ee soo qaada biyaha Zamzamka ama kuwa qaboojiya ayaguna waxay kamid yihiin calaamadaha saacada Qayaame. Wuxuu ibnu Abi Shaybah kusoo saaray... Continue Reading →